I-octopus ipeyintwe nge-95 yezigidi zeminyaka ubudala nge-inki | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-octopus yangaphambi kwembali ipeyintwe nge-inki yayo engaphezulu kwe-95 yezigidi ubudala
Inyaniso kukuba kukho amaxesha ngekhe siyeke ukumangaliswa ngamalinge ngakumbi kunye nobuchule babanye amagcisa. Kwakhona, ezinye zezindululo zinokulityalwa ukuba i-Intanethi ibingekho, ngakumbi kuba amajelo emveli ayephethe ukuhluza, kwaye sele siyazi ukuba kwenzeka ntoni xa ababini okanye abathathu bebambe izigqibo zokugqibela malunga nokuba umsebenzi unomgangatho okanye hayi Sukuyenza.
Umzobi waseDatshi ogama linguEsther van Hulsen, ngubani wafumana inki yakudala ngu-paleontologist u-Jorn Hurum, wasebenzisa oku ukudweba i-octopus eneetente ezisibhozo ebizwa ngokuba yi Keuppia eyayiphila ngexesha le Cretaceous. Le inki yafunyanwa kwifosili eyafunyanwa eLebhanon ngo-2009.
Yiba nefayile ye- i-inki ye-octopus Esandleni sakho kwaye unembeko yokuba nako ukuyisebenzisa ukwenza ukuba ezo zinto zanyamalalayo kufuneka ibe luxanduva olukhulu. Into uEstere ayilungiselele ukupeyinta i-octopus njengoko ubona kumfanekiso okwabelwana ngawo.
Umzobi ndinomdla ngobomi bezilwanyana kwaye udla ngokuzoba zonke iintlobo zeentaka kunye nezilwanyana ezanyisayo, ke eli thuba lokuba akwazi ukupeyinta i-octopus nge-inki eyafunyanwa kwi-fossil ngo-2009 eLebhanon, yafunyanwa njengesipho esivela kwi-Palvenn Museum ngo-2014.
Emva kwamawaka eminyaka, uHulson wamangaliswa yile nto umbala uhlale uqaqambile, igcinwe lonke eli xesha ukusuka kwi-cephalopod ye-ink sac. Into enika umdla eqaqanjiswa ngamazwi ka-van Hulsen:
Yazi ukuba esi silwanyana Usebenzise le inki ukusinda iyamangalisa nje.
Umbono walo mzekeliso kwavela kwibali likaMary Anning, isazinzulu ngamaNgesi kunye nomqokeleli weefosili owenza umzobo ofanayo wengxowa ye-inki ngo-1800. Umfuziselo kaHulsen wengwane ngoku ugcinwe kwiMbali yeMbali yeMbali eOslo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » I-octopus yangaphambi kwembali ipeyintwe nge-inki yayo engaphezulu kwe-95 yezigidi ubudala
Incwadana yephepha ekwayiyo icwecwe elibonisa imifanekiso
Umfoti uJames Mollison kwincwadi yakhe ubonisa apho abantwana balala khona emhlabeni